အခြားပစ္စည်းများစက်ရုံ - တရုတ်အခြားပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဓာတုဗေဒအမည်: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C7H12O4 မော်လီကျူးအလေးချိန်： 160 သတ်မှတ်ချက်ပုံပန်းသဏ္:ာန် - ရှင်းလင်းသော၊ အရောင်မရှိသောအရည်မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၆၀ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်% - ≥99ပြုတ်သောနေရာ - （101.3kPa - 190 ℃℃ ±3ရေပါဝင်မှု%: .10.1 flash point （ပွင့်လင်းဖလား）: 95 ℃အက်ဆစ်တန်ဖိုး mgKOH / g: .10.1 အလင်းယိုင်မှုညွှန်းကိန်း （20））: 1.4151 ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ （20 ℃ / 20 ℃）: 1.0561 အရောင် （APHA）: ≤ 20 လျှောက်လွှာ Waterborne reins ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေဖြင့်ကုသသောအေးဂျင့်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေမှပါးသောအရာများ (Hydrophobic ...
Ethylene glycol တတိယအဆင့် butyl အီ (ETB)
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Ethylene glycol တတိယအဆင့် butyl ether (ETB) CAS အမှတ် .: 7580-85-0 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C6H14O2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၁၈.၁၈ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ Ethylene glycol တတိယအဆင့် butyl ether (ETB) - အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်း၊ ပူစီနံအရသာနှင့်အတူအရည်။ အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်အများစုတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်၊ အမိုင်နို၊ နိုက်ထရို၊ အခန်းအပူချိန် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်ရေနှင့်အဆိပ်အတောက်နည်းခြင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ...
ပိတ်ထားသော Isocyanate Crosslinker KL-120
ဓာတုဗေဒအမည်: ပိတ်ဆို့ထားသော Isocyanate Crosslinker နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း: အသွင်အပြင်ဖျော့အဝါရောင် viscous အရည်အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာ ၆၀% မှ ၆၅% ထိရောက်သော NCO ပါဝင်မှု ၁၁.၅% ထိရောက်သော NCO နှင့်ညီမျှသည် ၄၄၀ Viscosity 3000 ~ 4000 cp 25 at 25 ℃ Density 1.02-1.06Kg / L၊ 25 at ရာသီဥတုအပူချိန် 110-120 ℃စွန့်ကြဲခြင်းကိုသာမန်အော်ဂဲနစ်အရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်ရေဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသောအင်္ကျီများထဲသို့လည်းပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ အဆိုပြုထားသောအသုံးပြုမှု - အပူကုသပြီးနောက်ဆေးကြောသန့်စင်မှုနှုန်းကို au သို့ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးသုတ်ထားသောရုပ်ရှင်၏အစာမြန်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
Hyper-Methylated အမိုင်နိုဗဓေလသစ် DB303
ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် - ၎င်းသည် organo ပျော်ဝင်မှုနှင့်ရေတွင်ပါ ၀ င်သည့် polymeric ပစ္စည်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသော crosslinking agent ဖြစ်သည်။ ပိုလီမာပိုလီမာပစ္စည်းများတွင်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်၊ ကာဗွန်အက်စစ် (သို့မဟုတ်) အိုက်ဒီဒ်အုပ်စုများပါ ၀ င်သင့်သည်။ အယ်လ်ကေးဒ်၊ ပိုလီစတီး၊ အက်ဆီလီ၊ အက်ပီစီ၊ ယူထရွန်နှင့်ဆယ်လူလာများပါဝင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သောခိုင်ခံ့မှု - ကတ်တလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုလျင်မြန်စွာဆေးကုသမှုခံယူသောတုံ့ပြန်မှု Economical အရည်ပျော်ပစ္စည်း - အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်း Wide လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်ပျော်ဝင်နိုင်မှု Excellent ကတည်ငြိမ်မှုသတ်မှတ်ချက်： အစိုင်အခဲ ：：98% V ...
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: Anionic surfactant ဆိုဒီယမ် diisooctyl sulfonate အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အသွင်အပြင် - အရောင်ဖျော့ဖျော့ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရည် PH: 5.0-7.0 (၁% ရေဖြေရှင်းချက်) ထိုးဖောက်ခြင်း (S.25 ℃) ။ ≤ 20 (၀.၁% ရေဖြေရှင်းချက်) တက်ကြွသောပါဝင်မှု - ၇၂% - ၇၃% အစိုင်အခဲပါ ၀ င်မှု (%) - ၇၄-၇၆% CMC (%): 0.09-0.13 အသုံးချမှုများ - OT 75 သည်အစွမ်းထက်။ anionic စိုစွတ်စေသောအေးဂျင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်အရေးယူ emulsifying ပေါင်း interfacial တင်းမာမှုလျှော့ချနိုင်စွမ်း။ စိုစွတ်စေသောအေးဂျင့်အဖြစ်၎င်းသည်သင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည် CAS NO ။ လျှောက်လွှာ Crosslinking အေးဂျင့် Hyper-Methylated အမိုင်နိုဗဓေလသစ် DB303 - မော်တော်ယာဉ်ချော； ကွန်တိန်နာကုတ်အင်္ကျီ； အထွေထွေသတ္တုချော； မြင့်မားသောစိုင်အခဲချော born ရေခံပြီးချော； ကွိုင်ဖုံးအုပ်။ Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 ယွန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာများနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်ဆေးကြောခြင်း၊ ဓာတုချေးခြင်း၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ထားသော Iso မျက်နှာပြင်၏ပွတ်တိုက်အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 3-Phenoxy-1-propanol မော်လီကျူးပုံသေနည်း: C9H12O2 မော်လီကျူးအလေးချိန်: 152.19 CAS NO .: 770-35-4 နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း: စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းများစက်မှုအဆင့်ပုံပန်းသဏ္Lightာန်အဝါရောင်အရည်အရည်စာ%% ≥90.0 PH 5.0-7.0 APHA ≤100အသုံးပြုမှု: PPH သည်မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိသောအရသာမရှိသောပွင့်လင်းသောအရည်ဖြစ်သည်။ ဆေးသုတ်ထားသော V ° C ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်အဆိပ်အတောက်ကင်းသောနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ တောက်ပနှင့် semi-gl အတွက်ထိရောက်သော coalescent အမျိုးမျိုးသောရေ emulsion နှင့်ပြန့်ကျဲမှုအင်္ကျီအဖြစ် ...
ဓာတုဗေဒအမည်: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C20H33N3O7 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၄၂၇.၄၉ CAS အမှတ် .: ၅၇၁၁ - ၄၅ - ၇ နည်းပညာညွှန်းကိန်း - အဝါရောင်ကြည်လင်သောပွင့်လင်းသောအရည်သို့အရောင်မဲ့ပုံပန်းသဏ္completelyာန်သည်ရေနှင့်လုံးဝရောစပ်နိုင်သည်။ stratification မပါဘဲ 1 Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 ထဲမှာပါတဲ့ (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာ .099.0% အခမဲ့ amine .010.01% အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အချိန်4~6နာရီပွတ်တိုက်ခုခံ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: Ethylene glycol diacetate မော်လီကျူးပုံသေနည်း: C6H10O4 မော်လီကျူးအလေးချိန်: 146,14 CAS NO .: 111-55-7 နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း: ပုံပန်းသဏ္ဌာန်: အရောင်အဆင်းပွင့်လင်းအရည်အကြောင်းအရာ: ≥ 98% အစိုဓာတ်: ≤ 0.2% အရောင် (Hazen): ≤ 15 အဆိပ်: နီးပါး Non- အဆိပ်, rattus norvegicus ပါးစပ် LD 50 = 12 ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်။ အသုံးပြုခြင်း - ဆေးသုတ်ရန်၊ ကော်ဆေးရန်နှင့်ဆေးသုတ်ရန်အတွက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်။ Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE စသည်တို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအစားထိုးရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းများကိုညှိခြင်း ...